Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ igwe grinder ose site na ọrụ?
Enwere ọtụtụ ọdịiche dị na ọrụ nke onye na -egwe ose, anyị na -ewebata isi ihe ole na ole iji nyochaa otu esi ahọrọ na ọrụ.
1. Nhọrọ nke isi ihe
Mgbe ị na -azụta igwe nri ose, isi ihe kacha mkpa bụ ihe nke agụba nke ngwaahịa a. Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị a na -ahụkarị bụ nkedo ígwè, igwe anaghị agba nchara na seramiiki.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya na kichin na -ekpo ọkụ na iru mmiri, igwe anaghị agba nchara nke na -adịghị mfe nchara bụ ezigbo nhọrọ, enwere ike iji ya gwuo nnu nnu. Agbanyeghị, igwe anaghị agba nchara dị nro karịa ọla ndị ọzọ, ọ na-adịkwa mfe iyi ya mgbe ejiri ya mee ogologo oge.
Igwe nchara bụ igwe siri ike nke ukwuu, ọbụlagodi pecorns siri ike ma buru ibu nwere ike ịdabere na ngwa ngwa. Agbanyeghị, ọghọm ya bụ na ọ dị mfe nchara, a ga -edobe ya na iru mmiri, enweghị ike iji ya gwuo nnu nnu.
Seramiiki bụ ihe siri ike, na mgbakwunye na ọ naghị agba nchara, ọ nwekwara ike gwuo nnu nnu. Tụkwasị na nke ahụ, a na -efesa ísì ụtọ ngwa ngwa n'ihi oke ọkụ a na -eme n'oge igwu ihe, mana ihe seramiiki anaghị adị mfe iwepụta ọkụ esemokwu, yabụ na ọ nwere ike idobe isi mbụ nke ose.
2. Ụdị nke na -edozi oke ọkpụrụkpụ ka bara uru
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbawanye arụmọrụ nke ose grinder, ị nwere ike chọọ ịlele ka ngwaahịa a nwere ọrụ ọzọ nke ịhazigharị ọkpụrụkpụ igwe nri. Mgbe anyị na-eri nri na tebụl, anyị na-ejikarị naanị ose na-enweghị isi tinye ụtọ; mana ọ bụrụ na -eji ya esi nri, anyị nwere ike chọọ mkpụrụ ose nke oke ya. Ị nwere ike họrọ dịka mkpa onwe gị siri dị.
3. Ọdịdị enwere ike ịpụ apụ, anaghị agba nchara dị mfe nhicha
Enwere ike ịwụnye ma hichaa ụdị ihe eji esi nri ose dị mfe n'ihi nhịahụ dị n'ime ya, mana ọtụtụ ụdị ngwaahịa ndị ọzọ enweghị ike ịkasị, nke na-abawanye ike nhicha na ndozi. Ọ bụrụgodi na ọ bụ ihe nlereanya nke enwere ike ịkwatu, iji zere iru mmiri mgbe ọ sachara ma kpatara nchara, a na -atụ aro ka ị jiri akwa akọrọ dị ọcha hichaa ya kama iji mmiri dị ọcha na -asacha.
Agbanyeghị, isi nri ga -ebute anwụrụ mmanu na ntụpọ mmanụ na igwe nsị ose, ọ na -esikwa ike ịsacha ya nke ọma naanị site nhicha. N'oge a, a na -atụ aro ka ịzụta ụdị eji enyo ma ọ bụ ihe acrylic mee. Tụkwasị na nke ahụ, eriri seramiiki adịchaghị nchara karịa nchara. Enwere ike ihicha ihe ndị a ngwa ngwa.
4. Ụdị nke nwere ike ịhụ ike fọdụrụ na nlele dị mma maka ndị na -eji ya ugboro ugboro
Mgbe ị na -esi nri, ị ga -enwerịrị ahụmịhe nke ịtụtụ karama ihe na -esi ísì, naanị chọpụta na karama ahụ tọgbọ chakoo. Ọ na -esiri m ike? Karịsịa maka efere na -achọ eghe ngwa ngwa, ọ bụrụ na ị ga -akwụsị ịtinye ihe na -esi nri n'oge nri, ọ nwekwara ike imetụta ụtọ nke efere a gwụchara. Ya mere, agbanyeghị na igwe nri osisi na -adị ka ihe mara mma ma bụrụkwa ihe na -atọ ụtọ, ọ bụrụ na ị na -eji ya ugboro ugboro, a na -atụ aro ka ịzụta ngwaahịa sitere na ihe ana -ahụ anya dị ka iko ma ọ bụ acrylic, ka ị wee hụ ike fọdụrụ na nlele!
Ụdị nkwọcha ose dị iche iche nwere uru na ọghọm dị iche iche. A na -atụ aro ka ị rụtụ aka na isi ihe ndị a na -ekerịta taa tupu ịzụta, wee họrọ ụdị dabara adaba dịka mkpa gị si dị!